Iphupha malunga nokucheba Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukucheba kusika iinwele ezingafunekiyo ngaphandle kokonakalisa iingcambu zazo. Ke kuya kufuneka uchebe kaninzi-ninzi kuba iinwele ziyakhula.
Kwixesha elidlulileyo, amatye e-flint asemhlabeni, iimela zamatye, iiglum shells kunye namazinyo okrebe asetyenziselwa oku. Namhlanje sinezitshetshe zombane, iincakuba okanye iincakuba esinazo. Enye ikhuseleke ngakumbi, enye icingelwa ukuba igqibelele. Amadoda asebenzisa olu hlobo lwezixhobo ukunciphisa iindevu zawo, asike kwaye anciphise iindevu okanye iimilo zentshebe. Iindevu zeentsuku ezintathu kulula ngakumbi ukuzikhathalela, njengoko, njengoko igama lisitsho, kufuneka kuphela ukuba lichetywe ngokungalinganiyo.
Zombini izibonelelo zidibanisa iincakuba zombane ezingangenwa ngamanzi. Iimveliso zokuthambisa ezinje ngegwebu kunye nejeli, kunye nezinto zokuthambisa zolusu, zenza ukucheba isenzo sentlalontle. Amadoda awachebi iindevu zawo kuphela, kodwa, umzekelo, isifuba neenwele zomlenze. Abasetyhini nabo balahla iinwele ezingaphantsi kwekhanda kunye neenwele ezingabonakaliyo ze-bikini ngale ndlela, ngamanye amaxesha kwaneendevu zowesifazane.
Ukuba umntu uphupha ukucheba phambi kwesipili kwigumbi lokuhlambela, umzekelo, banokungoneliseki yinkangeleko yabo. Mhlawumbi ufumene ubu-sloppy kwaye ungathanda ukuphinda ubonakale uzilungisa kakuhle ngokucheba. Kwinkcazo yephupha, iinkcukacha ephupheni zinika ulwazi oluchanekileyo malunga nengxelo yesimboli yephupha: Ngaba uyazicheba okanye omnye umntu? Okanye uyacheba? Ukutyelela i-esthetician okanye umgcini wezinwele?
Ngoku funda olona toliko lubalulekileyo lwesimboli yamaphupha "sheve". Amalungu omzimba kunye nabantu abachebayo okanye abachebi zibaluleke kakhulu:
1 Isimboli yamaphupha «ichetyiwe» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ilungu lomzimba elichebe ephupheni.
1.1.1 Ukucheba iinwele phantsi kwekhwapha ekutolikeni amaphupha.
1.1.2 Iingalo ezichetyiweyo ephupheni
1.1.3 Iphupha lokucheba amashiya akho
1.1.4 Cheba ubuso neendevu, ephupheni uchebe iindevu zomfazi
1.1.5 Ukucheba intloko, ukucheba iinwele neenwele - ukutolikwa kwamaphupha
1.1.6 Cheba umqolo wakho ngelixa ulele
1.1.7 Cheba amalungu akho abucala ngelixa uleleyo
1.2 Ngubani ocheba okanye achebe ukuphupha?
1.2.1 Umfazi utsheva ephupheni.
1.2.2 Ukuphupha ucheba umntu
1.2.3 Ceba ephupheni
2 Uphawu lwephupha «luchetyiwe» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «luchetyiwe» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «luchetyiwe» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha «ichetyiwe» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ilungu lomzimba elichebe ephupheni.
Ukucheba iinwele phantsi kwekhwapha ekutolikeni amaphupha.
Iphupha lokucheba iinwele phantsi kwekhwapha libonisa ukuba kwikamva umntu unokufumana ngemali encinci. Oku kunokuba ngenxa yokuba umntu ophuphayo ebeka kwakhona izinto eziphambili ebomini, umzekelo, ukusebenzisa ibhasi endaweni yemoto ebiza kakhulu. Kwangelo xesha, ulusu lwekhwapha oluchetyiweyo kakuhle lufanekisela ubudlelwane obungenasiseko.
Iingalo ezichetyiweyo ephupheni
Ukuba iingalo zinoboya ephupheni kwaye zichetyiwe, kwixa elizayo kungakho ibhotile yezemali. Jonga iimeko nabantu abanokubeka emngciphekweni izinto zakho. Kuba iinwele ezisesandleni sakho zinento ekhuselayo kwaye ziyishiya xa uchetyiwe, uziva usengozini yokulahleka kwemali nokuba ungene el mundo ukuvuka.
Iphupha lokucheba amashiya akho
Ukuba ucheba amashiya xa ulele, uya kubona ilahleko yemali. Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, amashiya amancinci okanye akude amele amaxhala kunye neentlungu, kwaye oku kuboniswa ngokwenyani ikakhulu ngokunxulumene nemali ebizayo. Nika ingqalelo ngakumbi kwiindleko zakho kungekudala!
Cheba ubuso neendevu, ephupheni uchebe iindevu zomfazi
Ngaba waphupha ukuba ucheba iindevu okanye ubuso? Oku kucheba, njengophawu lwephupha, kukwabonisa ilahleko ngokwezoqoqosho. Ukusika iindevu kubonisa ukonakala okwenziwa ngabom. Ukuba umntu ucheba iindevu zowasetyhini emaphupheni akhe, le meko yephupha ibonisa umngcipheko olithathayo iphupha elo. Kukwasebenza kwanjalo kuyo xa umntu ophuphayo ephupha ngenwele, nangona eneneni engenazo iindevu zebhinqa.
Ukucheba intloko, ukucheba iinwele neenwele - ukutolikwa kwamaphupha
Impembelelo yayinkulu ngokuqinisekileyo xa wawuchebile intloko yakho ephupheni, akunjalo? Ngokukhawuleza ukuba iinwele zilahlekile entloko ephupheni, ukukhula okuqinisekileyo kuyaboniswa: ulwazi lufunyenwe kwaye ukusukela ngoku ubomi bujongwa ngokungathí sina. Impumelelo yentlalontle inokwenzeka kwakhona ukuba wahlula iinwele ephupheni. Nangona kunjalo, ukuba omnye umntu ucheba intloko yakhe enenkqayi, kukho umngcipheko wobunzima bezezimali.
Cheba umqolo wakho ngelixa ulele
Ukuba ukhathalela umqolo wakho ephupheni kwaye ulahle iinwele zakho, kungekudala uzokhulula iqhina kwihlabathi elivukayo-isigaba soxinzelelo ngokuthe ngcembe siyaphela. Umthwalo uyehla, kwaye ukulala kungathatha umoya ophefumlayo kwakhona. Kwangelo xesha, umva osandula ukuchetywa ungakhomba kwimfihlelo umntu lowo kuthethwa ngaye anqwenela ukukhusela kwindawo angqongileyo. Le mfihlakalo isongela ukuziveza ngokungumfuziselo xa utsheva.
Cheba amalungu akho abucala ngelixa uleleyo
Ukucheba amalungu abucala ngokuqinisekileyo kuphakamisa imibuzo xa uvuka kwelo phupha. Ngapha koko, ukujongana namalungu esini kubonisa inkxalabo ngesini sakho. Ngokucoca okucocekileyo kwale ndawo yomzimba, i-subconscious yomphuphi ibonakalisa ukuba kufuneka ayinyamekele ngakumbi iminqweno yakhe yesini kwaye, ukuba kukho iqabane, kufuneka alinyanzelise.
Ngubani ocheba okanye achebe ukuphupha?
Umfazi utsheva ephupheni.
Xa ucheba umfazi ephupheni, ukutolikwa kwephupha kuxhomekeke kwisini somntu ophuphayo: ukuba indoda iphupha ngokucheba umfazi, umnqweno wesondo ongonelisekanga uyabonakaliswa. Ukuba umfazi uphupha ngale meko okanye ukuba utsheva ephupheni, uya kuphula kunye nenxalenye ethile yobuntu. Umntu ochaphazelekayo okwangoku uyaphuhliswa buqu.
Ukuphupha ucheba umntu
Ukucheba omnye umntu kumava ephupha kubonakala ngathi yimeko engaqhelekanga ekuqaleni. Le meko injengephupha ibonisa isilumkiso: kukho imeko-bume yabantu abaphupha ukuba banokubangela ingozi. Ngobuchule babo bokucenga bazama ukulilimaza ixhoba. Lumka xa ukhetha abahlobo!
Iphupha lokucheba kwakho ephupheni lifanekisela ukulungiswa. Oku kunokuthetha ukuba amatyala kunye neekhredithi ekufuneka zihlawulwe. Ukuhlawula usapho okanye izihlobo kubaluleke ngakumbi ukuze ungabeki emngciphekweni ubudlelwane ngenxa yemali eshiyekileyo, iyinyani kwimotto "Imali ichitha ubuhlobo".
Uphawu lwephupha «luchetyiwe» - ukutolikwa ngokubanzi
Ephupheni lomntu, uphawu "lokuphuculwa" kwephupha ikakhulu libonisa ubomi bemihla ngemihla kunye nesiqhelo. Ukuchetywa ephupheni lomntu obhinqileyo, nangona kunjalo, kubonisa ukutolikwa kwephupha injongo, egudileyo kwaye ke Umphezulu ongenakuchukunyiswa ukuthobela.
Ke ngoko, ukutsheva kuthetha ukuzixhobisa ngokuchasene nokuhlaselwa okunokubakho. Ngokubanzi, isixhobo esisetyenziselwa ukucheba, imela okanye isixhobo, sikwanomnqweno othile wokuthatha umngcipheko: ngekhithi yokucheba, utyhila ubuso bakho bokwenyani kwaye wamkele iimpendulo.
Ekuchazeni iphupha, kubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuba ngubani ochebe ephupheni kwaye ngubani owenzileyo. Ukuba umntu uphupha ukuba uyacheba, uphawu lwephupha lumlumkisa ukuba ahlawule amatyala akhe okanye enye ngenzuzo anokuyenza. Ukulungiswa ukuhlawula.
Ukuvumela abanye bachebe ephupheni kuthetha ukuba uzivumele ufumaneke ekutolikeni iphupha: ukuphupha kufuneka ulumke nabantu abazama ukukucenga ukuba wenze into kwaye bayisebenzise.
Ngale ndlela, isimboli yephupha ethi "shave» ayisiyiyo enye kuphela isilumkiso bobuxoki babanye, kodwa nokuzikhohlisa. Uphupha umntu obhinqileyo, ubona amadoda etsheva, oku kubonisa ukutolikwa kwephupha ekufuneka woyike igama lakho.
Ukuba owasetyhini unokucheba ephupheni, uphawu lwephupha luyenza icace into yokuba unokwamkela isimilo sobudoda ebomini kwaye ke ngoko woyikise abanye.
Uphawu lwephupha «luchetyiwe» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lamaphupha, uphawu lwephupha elithi "sheve" lithetha ukucinga ngokuhlalutya. Kwakhona, kubandakanya umnqweno wephupha lokuthambisa into kunye nokuhombisa. Mhlawumbi inombono wokuba Fungisa kufuneka iphuculwe kwabanye. Banokungoneliseki yimifanekiso yabo kwaye bafuna ukuyipolisha ngokucheba.
Ngokwengqondo, isixhobo sokucheba asisixhobo. Ngenxa yoko, ikwangaphezulu isenzo sononophelo qonda, ukuba ukuphupha utsheva omnye umntu okanye kungenjalo. Kubantu abakwishumi elivisayo, nangona kunjalo, ukuba nephupha lokucheba kuyinto eyoyikisayo. Kubalulekile ukutolikwa kwamaphupha ukuba ngubani ocheba iphupha.
Iindevu zifunyanwa phantsi kwemiba yengqondo ekutolikeni kwamaphupha, uphawu lobudoda olunokufihla ubuthathaka obuthile. Ukuba oku kunqunyulwe ephupheni, uphawu lwephupha elithi "shave" lubonisa uloyiko lwamaphupha malunga nokulahleka kobudoda bakho, obukhe wawucinezela ngaphambili. Uloyiko lokungaphumeleli ngokwesondo lukwabonakaliswa kuye.
Uphawu lwephupha «luchetyiwe» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, uphawu lwephupha lubonisa "uchetyiwe" kwinkcazo yephupha. ubuchule beemvakalelo yokuphupha. Ifuzisela ukuvuleka nokunyaniseka xa ujongene nabanye abantu.